Androany amin'ny tantara | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeANKAPOBENYAndroany teo amin'ny tantara
Vaovao an-dalamby amin'ny tantara
Androany amin'ny tantara 14 Novambra 1925 Suleyman Sirri, lefitry ny Nafia ao amin'ny kabinetran'i Ismet Pasha dia maty pnemonia taorian'ny diany nianatra ny lalamby Samsun sy Edirne. Voalaza fa manana ny fampanantenan'i mek knitting ny firenena amin'ny haraton'ny vy izy .. Railway mitovy [More ...]
Androany amin'ny tantara 13 Novambra 1889 Ny famokarana fambolena Ottoman dia nitombo ny 63 tamin'ny salanisan'ny salanisa. Vaovao amin'ny lalamby fitaterana sy tariby mitovitovy amin'izao fotoana izao amin'ny tantara: 13 Novambra 1889 Ny famokarana fambolena Ottoman dia nitombo ny 63 amin'ny salanisan'ny salanisa. 13 / 11 / 2012 Androany amin'ny tantara 13 Novambra [More ...]
Tantara androany 12 Novambra 1918 Ny taratasy alefa any amin'ny Direction General de la route de Anatolian Railways dia nitatitra fa ny miaramila dia afaka manome arina amin'ny sandan'ny 1400 raha toa ka lafo ny orinasa. 12 novambra 1935 Irmak-Filyos filoham-panjakan'i Nafia Ali [More ...]
Androany tao amin'ny tantara 11 novambra 1961 Tale Jeneraly Jeneraly Jeneraly Behiç Erkin dia nodimandry tamin'ny taona 84. Nandritra ny tolona nasionaly, ny Empira Colonel Behiç (Erkin) Bey, izay avy any Istambola ka hatrany Ankara, dia voatendry ho Mpitantana Lehiben'ny Jeneraly an'ny Fitaterana an-dalamby. 1921-26 [More ...]
Androany amin'ny tantara 10 Novambra 1923 Nisy fifanarahana natao niaraka tamin'i Huguenin ary ny solontenan'ny Nafia Mukhtar tao amin'ny lalamby ao Anatolian. Vaovao an-dalamby sy tariby mitovitovy amin'ny vaovao ankehitriny ao amin'ny tantara: 10 Novambra 1923 fifanarahana eo amin'i Huguenin sy Nafia Deputy Mukhtar amin'ny lalamby Anatolian [More ...]
Tantara 9 Novambra 1919 Tamin'ny telegrama avy amin'ny Taurus Regional Command ka Adana Regional Command, dia tsy nisy machinist an'ny lokomotif. Toy izany koa ny lalamby lalamby sy tariby NewsHistory [More ...]
Androany amin'ny tantara 8 Desambra 1874 Agop Azarian Company dia nampanantena ny hanajanona ny 12 ao anatin'ny volana vitsivitsy ho fikendrena ny fananganana ny tsipika Belova-Sofia. Vaovao momba ny lalamby fitaterana sy tariby mitovitovy amin'ny vaovao ankehitriny amin'ny tantara: 8 Desambra 1874 Agop Azarian Company, zotra Belova-Sofia [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara 7 Novambra 1918 Nasaina nanao tatitra tsy tapaka ny toe-draharahan'ny hazo sy ny arintany ao amin'ny toeram-pivarotan-tserasera isan'andro ireo komisiona miaramila ao amin'ny lalamby. 7 Novambra 1941 Avy any Diyarbakır sy Elazığ any amin'ireo sisintanin'i Irak sy Iran [More ...]
Androany amin'ny tantara 6 Novambra 1870 Yedikule-Küçükçekmece andalana dia voamarina amin'ny sitrapo. Nivoha ny 6 Novambra 1948 Maraş station sy ny tsipika Köprağzı-Maraş (28 km). Vaovao momba ny lalamby sy ny tariby fiara NewsHistory Ankehitriny: 21 Jolay 1872 Sirkeci-Yedikule [More ...]
Androany amin'ny Tantara 5 Novambra 1903 Araka ny didim-pitsarana dia nanapa-kevitra fa ny antsasak'ireo nahazo alalana Hendeshane-i Mulkiye dia hampiasaina amin'ny làlan'i Hejaz. Io fangatahana io dia natolotra tamin'ireo nahazo diplaomasin'i Mekteb-i Sanayi sy Darü'l-Hayr-i Ali tao amin'ny 1906. 5 Novambra 2016 Local Tram tao Samsun [More ...]
Androany teo amin'ny tantara 4 Novambra 1910 Rosia sy Alemana dia nanapa-kevitra fa tsy hifanome fanamby ny tsirairay momba ny tombontsoa avy amin'ny lalamby efa vitany tany Postdam tany amin'ny Fanjakana Ottoman. Ireo firenena roa ireo koa dia manangana andalana iray eo amin'i Teheran sy Hanikan mba hifandray amin'ny Railway Baghdad. [More ...]
Androany tao amin'ny History 3 Novambra 1918 Mpitarika ny Tafika Mpanazava ny Tafika Mustafa Kemal Pasha dia nanoratra fa na dia ny tafika entente aza dia nipetrahan'ny tafika entente mba hiaro ny Taurus Taures, tokony hanohy hiara-miasa amin'izy ireo ny tafika Tiorka. [More ...]
Androany tao amin'ny tantara 2 Novambra 1918 Mpitarika ny tafika mafana fo Mustafa Kemal Pasha, tao amin'ny faritaniny no namoaka didy momba ny lalamby; Ny lalamby rehetra any atsimo manakaiky an'i Konya dia nekena tao amin'ny faritra misy ny ziogan'ny tarika Yıldırım. Mpitondra andalana sy [More ...]
Androany tao amin'ny tantara 1 Novambra 1899 sampana sampana Arifiye-Adapazarı (8,5 km) no nosokafana. Ny 1 November 1922 Aydın Line dia nafindra tany amin'ny orinasa Britanika tamin'ny fangatahan'ny mpitantana orinasa. Nijanona tao amin'ny birao ireo mpiandraikitra ny Tiorka Taorian'ny Fidiran-doza Mudanya, ny Antenimieram-pirenena Nasionaly ao Torkia [More ...]
Androany ao amin'ny tantara 31 Oktobra 1919 Jeneraly Milne dia nitaraina tamin'i Cemal Pasha momba ny fipoahan'ny tetezana eo akaikin'i Eskisehir. Tiany ho voaro tsara ny lalamby. Teny mitovy amin'ny lalamby sy tariby NewsHistory Androany: 31 Oktobra 1919 Jeneraly [More ...]
Tantara Today 30 Oktobra 1897 Ejipta Extraordinary Kaomisera Ahmet Muhtar Pasha, Sultan azom-pahoriana izy Abdulhamid nanoratra niresaka Damaskosy alalan'ny Lakandranon'i Suez, ary nanomboka avy hatrany hanao ny tolo-kevitra ao amin'ny ambaratonga avo Konya avy any Damaskosy mba railway- maotera tsipika manolotra 26 Janoary Ottoman 1898 [More ...]
Androany ao amin'ny tantara 29 Oktobra 1919 Ny Firaisana Iraisam-pirenena dia nanao fiakarana ho an'ny fitaterana mpiasam-panjakana. 15 Janoary-15 aprily 1920 isan-jato isan-jato ny 50, 16 april - nitombo ny 30 1920 isan-jaton'ny daty 400 daty. Aorian'io daty io dia hampahafantarina misaraka [More ...]
Androany amin'ny tantara: 28 Oktobra 1961 Eskişehir Railway Factory
Androany tao amin'ny Tantara 28 Oktobra Nalefa tamin'i M.Alfred Kaulla ny tombontsoan'ny 1890 Thessaloniki-Monastery Monina, izay niasa ho an'ny vondrona Alemana iray niaraka tamin'ny Banky Deutsch. 28 Oktobra Navoaka tao Mebreke-tü'n-Naka ny station 1918 El Mazzre. Avy eo ny fiantsonana farany avaratra [More ...]
Androany amin'ny Tantara: 27 Oktobra 1956 Halkalı-Serasera ny varotra
Androany amin'ny Tantara 27 Oktobra 1956 Halkalı-Sirkeci commuter line line fananganana elektrika, rafitra fanaraha-maso foibe sy lamasinina mandeha herinaratra nanomboka niasa. Lalana toy ny lalamby sy tariby vaovao NewsHistory Androany: 27 Oktobra 1956 Halkalı-Sindray tsipika elektronika varotra [More ...]
Androany amin'ny tantara 26 Oktobra 1936 Eskiköy-Çetinkaya nosokafana. Tonga tao Ankara ny lamasinina voalohany. 26 Oktobra 1953 Gaziantep-Narlı Railway dia nampidirina. 26 Oktobra 2016 Tranon-tsarimihetsika voalohany eto an-toerana tao amin'ny tranokala voalohany tany Bursa Samsun izay tonga tao an-tanàna [More ...]